Usuku ilungu lamasotsha aqeqeshelwe ukugxuma emabhanoyini akuyona esemthethweni, kodwa lodumo kabanzi eRussia parachutists wezempi, abantu abathintekayo Awamapharashuthi, futhi nayizimfundamakhwela. Umlando wabo lo mkhosi ibala kusukela 1930. Julayi 26 kwalowo nyaka, bandisa Soviet, eliholwa V Muhortova wokuqala wenza ekwehleleni nge-parachute laphaya edolobheni Voronezh. Ngemva kokuziphatha umcimbi oyimpumelelo ezinjalo, ngesinqumo somthetho we Air Force Institute, abashayeli bezindiza empi ifakwe imishini wokutakula. ezine gxuma lwenziwe ngalolu suku. Futhi izinsuku ezintathu nge-parachute wagxuma abantu abangaphezu kuka-30.
Lolu hlobo ekugcineni ukutakulwa masinyane waya ebhange, futhi ngawo lowo nyaka ayenziwa ngokuziphonsa ezihlukahlukene izimo ezimbi kakhulu futhi imvelo ezahlukene: usuka endaweni ephakeme kakhulu futhi ebusuku, futhi amanzi, neqhwa, kanye eside, lapho abalandeli ke kangaka uyakuthanda.
Owesifazane wokuqala ukwenza gxuma parachute, Wayengubani u-Alexander Chirkov, Kuleshov, V. Fedorov. Lokhu kwenzeka ngo-1930. Babengabantu eqinile-willed abanokuhlangenwe eqinile intando, isibindi, angesabi, okuyinto kungaba Russian.
Kuyini engabuye ijabulise ezingaphezu kuka Skydiving? Lokhu rush adrenaline, umuzwa inkululeko unfettered, bazinqoba zonke nokwesaba kanye nobunzima injabulo engenamkhawulo!
On the ilungu lamasotsha aqeqeshelwe ukugxuma emabhanoyini Day ngokuvamile iphatha ababeqhudelana umbukwane nge-parachute. Futhi, kukhona imikhosi ezimibalabala parachutists. On kubo ungabona ukusebenza engalibaleki lokhu okuyinhloko kanye amazing stunts esibhakabhakeni wabavocavoci. Zibonisa ukunemba ukufika, Dome futhi acrobatics iqembu nokunye okuningi.
Usuku ilungu lamasotsha aqeqeshelwe ukugxuma emabhanoyini - iholidi emangalisayo kubo bonke abangekho qakala esibhakabhakeni. Ngalolu suku, ivulelwe noma ubani ofisa ukwenza ithuba engalibaleki gxuma nge-parachute. Siyakuhalalisela ngeholide lolu suku ehlobo ukuzwa hhayi kuphela skydivers lempi nge-parachute futhi abahlanganyeli, kodwa futhi abalandeli kanye nabantu bokuqala nesibindi ukuze bathathe lesi sinyathelo. Minyaka yonke njalo agcwaliswa kwababusi labo abafisa ukuthi ujoyine Skydiving. Phela, imizwa eyodwa nakho esibhakabhakeni, ayikwazi siyithole kunoma imuphi umsebenzi yasemhlabeni. Kuphela nesibindi futhi kwakwakhiwa esibhakabhakeni uhambisa. Kuphela elinesibindi angabhekana ngayo parachute.
Siyakuhalalisela parachutist evesini
Nge-parachute oh hhayi nje
Jump, ukusebenzisa futhi fly.
Ngisho noma ngabe unazo kwesiqu encane,
Ngakho uzokwazi ukuba uvuke!
Kumele abe nesibindi, onesibindi,
Ungesabi noma yini,
Ukuze ugxume kalula ngakho!
Nge-parachute, like inyoni,
Wena ezindiza amafu.
Futhi phezu kucwila phansi,
Usto wena ngezinyawo zakho!
Parachute wena esengumfowethu.
Nokho, wena nabangane abahle kakhulu.
Nge naye emafwini
Futhi ukukubona phezulu!
Nge-parachute e Ngohlelo ukwenza eqa,
Ungesabi wena manje, umngane wami,
A elinesibindi ehlanganisiwe naye,
Unqoba isibhakabhaka, kube esinganqobeki!
Emangalisayo ngosuku parachutist,
Ukugqoka parachute enhle
Futhi ukunqoba esibhakabhakeni ngokushesha,
Uzothola khona ukuthula, indawo yokuhlala.
phezulu Izintandokazi ubhekisisa,
Wena ikhuphuka like inyoni,
Makhulu injabulo umuzwa,
Wena ufike kahle!
Ukukhangisa ejensi ukuthuthukiswa kwamabhizinisi izinkampani ezintsha